मेरो पुनर्जन्म हुँदैछ -नायक दिलिप रायमाझी | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाल-दाहाल सहमति अलपत्र
‘सर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्न दिने तयारी’ →
हो, विगतमा केही कुरामा मबाट केही त्रुटि भए होलान् । यद्यपि ती जानाजान भएका होइनन् । अनायसै पाएको सफलतापछि त्यसलाई सम्हाल्न सकिनँ होला अथवा १० वर्षअघिसम्म म दिमागले भन्दा मनले बढी सोच्थेँ कि ? त्यसैले अभिनयको प्रस्ताव गर्ने सबैको मन राख्न भकाभक चलचित्र साइन गरेँ । त्यसमा केही राम्रा चलचित्र भए भने केही नराम्रा । मैले अब चाहिँ आफूलाई सम्हालिसकेको छु ।
अब ढिलो भएन र ?
छैन, कसरी भयो र ढिलो ?
तपाईंको मार्केट खस्किएको कुरा गरिन्छ नि ?
मार्केट खस्किएको भए मलाई एक दिन बिराएर एउटा नयाँ चलचित्रको अफर आउँदैनथ्यो होला । मैले विगतमा जस्तो थोकको भाउमा चलचित्र साइन गरेको छैन । अहिले म भूमिका सुनेर बुझेर मात्र चलचित्रमा देखा पर्दैछु ।
यहाँ पैसाका लागि जस्तोसुकै भूमिकामा पनि देखिन तयार हुने कलाकार पनि त छन् नि ?
अरूका ’boutमा म केही जान्दिनँ । म भने आफूलाई सुहाउने भूमिकाका लागि मात्र तयार हुन्छु ।
त्यस्तो भूमिका पाउनुभएको छ त ?
छ नि, ‘पलपलमा’ रिलिज हुँदैछ । हास्यप्रधान ‘नमस्ते’को सुटिङ भर्खरै सकियो । अब केही समयमा ‘मेरो जीवनसाथी’को छायांकन सुरु हुन्छ । अनि अरू पनि चलचित्रको कुरा भैरहेको छ । ढुक्क हुनुहोस्, अब दिलिप रायमाझीको पुनर्जन्म हुँदैछ ।
यही जन्ममा पुनर्जन्म ?
हो, यही जन्ममा । शारीरिक अभ्यासका लागि रेगुलर क्लब धाइरहेको छु । ड्रेस अप र हेयर स्टाइलमा ध्यान दिएको छु । काम नपरी राति धेरै बेर बाहिर बस्दिनँ । खानपिनमा सजक भएको त धेरै भयो । त्यसैले दिलीप रायमाझी फेरि नयाँ रूपमा आउँदैछ ।